Dr. Tint Swe's Writings: November 2019
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ တမို့ တမြေ တနေ သိထားတာက တမိုးတမြေ တဲ့။
တမို့ တမြေက အချုပ်တန်းဆရာဖေ ရေးသားထားတဲ့ မယ်ဘွဲ့ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ တမိုးတမြေ ရုပ်ရှင်ရှိတယ်။ တမိုးတမြေ သီချင်းရှိတယ်။ တခြားလည်းစာတွေရှိသေးပါတယ်။
ကဗျာ၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ သီချင်းတွေမှ တတွေကို စသတ်မထားပါ။
ပဒေါင်ပါ ယင်းဘော် ယင်းတလဲ ဖယဲတွေ
ကိန္နရီယမင်းမျိုး သတိုးဆွေ စိုးနေ
သံပုရာသီး နှစ်လုံးခန့်ကို ပါးပါးလှီးပြီး ရေနွေးဖြူ နဲ့ နေ့တိုင်းသောက်ပါတယ် ကြာရင် အူတေ မကောင်းဘူးလို့ အမေက ပြောလို့ပါ ဆရာ ဟုတ်ပါသလားဆရာ ကျမ အသက် ၂၉ပါဆရာ အစားမက်တဲ့သူမို့လို့ ဒီလို သောက်တာပါဆရာ အပြင်က အဆီကျဆေးတွေ မသုံးပါဆရာ အားကစားနေ့တိုင်းလုပ်ပါတယ်
သံပရာသီးကို လူတိုင်းစားသောက်ကြတယ်။ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ စားတယ်။ အရပ်ဆေးနည်းတွေ မသိပါ။ ဆောရီး။
အူတေလို့ရေးတာ မှားတယ်။ အဲလိုမှားတဲ့သူတွေ အတော်များတယ်။
ဘာသာပြန် - သုတ - ရသ ဆုရစာအုပ်များစာရင်း တင်ထားတာ တွေ့တယ်။ ကျေးဇူး။
• ၁၉၅၂ မျှော်တလင့်လင့်၊ ရွှေဥဒေါင်း
• ၁၉၅၄ အီစွတ်ပုံပြင်များ၊ မင်းယုဝေ(ငွေတာရီ)
• ၁၉၅၅ သွေးစုပ်မြေ၊ ရွှေဥဒေါင်း
• ၁၉၅၆ ဘဝအထွေထွေ၊ သိပ္ပံစိုးလှ
• ၁၉၅၇ လူလောနာနာဘဝလော၊ ဗိုလ်အေးမောင်
• ၁၉၅၈ ပျိုတို့အချစ်တော်၊ တင့်တယ်
• ၁၉၅၉ ရော်ဘင်ဆန်ကရူးဆိုး၊ ဒဂုန်ရွှေမျှား
• ၁၉၆၂ ယိုးဒယားဝှိုက်၊ ဦးစံဝင်း
• ၁၉၆၃ သုန္ဒရနန္ဒ (ခေါ်) ညီတော်မင်းနန်၊ (ပထမဆု) ပါရဂူ
• မြို့ဝန်မင်း၏ဘဝခရီး၊ (ဒုတိယဆု)၊ ဒဂုန်ရွှေမျှား
• မာကိုပိုလို၊ (တတိယဆု)၊ ဦးလှဒင်
• ၁၉၆၄ ဂျူလိယက်ဆီဆာ၊ (ပထမဆု)၊ မန်းတင်
• ရတနာရွှေမြေ၊ (ဒုတိယဆု)၊ ဦးလှဒင်
• ဂိုဒါန်၊ (တတိယဆု)၊ မောသီရိ
• ဆွတ်ချူပါရစေသခင်ရယ်၊ (စတုတ္ထဆု)၊ မောင်ကြည်ဦး
• ၁၉၆၆ လောင်းရိပ်ပန်း၊ (ဒုတိယဆု)၊ အောင်ကျော်ကျော်
• ၁၉၆၇ တောရိုင်းမြေ၊ (ပထမဆု)၊ ကျော်အောင်
• သွေးမြေကိုကျောခိုင်း၍၊ (ဒုတိယဆု)၊ ခင်ကြီးအောင်
• တော်စတွိုင်း၏ဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်၊ (တတိယဆု)၊ တင်စိန်ငယ်
• အာဇာနည်ကျောင်းသားမောင်နှမ ဇိုယာနှင့် ရှုရာ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ (စတုတ္ထဆု)၊ ဦးဘသင်
• ၁၉၆၈ ပင်လယ်ပြာနှင့်တံငါအို၊ (ပထမဆု)၊ မောင်ဆုရှင်
• နံနက်ခင်းကိုစိုးမိုးသူ၊ (ဒုတိယဆု)၊ မြသိန်း(တပ်မတော်ပညာရေး)
• ရဲသွေးနီနီ၊ (တတိယဆု)၊ အောင်ခန့်
• ဖဲသမား၊ (စတုတ္ထဆု)၊ ဆန်းလွင်
• ၁၉၆၉ ဦးလေးတွမ်၊ ကျော်လှိုင်ဦး
• ၁၉၇၁ သူတို့သုံးယောက်၊ တောင်တွင်း ကိုကိုကြီး
• ၁၉၇၂ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ မြသန်းတင့်
• ၁၉၇၃ ရေသူမလေး၊ အံ့မောင်
• ၁၉၇၄ မောဂ္ဂလိ၊ ထင်လင်း
• ၁၉၇၈ လေရူးသုန်သုန်၊ မြသန်းတင့်
• ၁၉၇၉ နင်လားဟဲ့ချစ်ဒုက္ခနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ၊ (ရသ)၊ ဇော်ဂျီ
• ၁၉၈၀ တထောင့်တညပုံပြင်များ (၁) ၊ (ရသ)၊ ကျော်လှိုင်ဦး
• ၁၉၈၁ ဂါလီဗာ၏ခရီးစဉ်၊ (ရသ)၊ မောင်ထင်
• ၁၉၈၃ ရဲတိုက်၊ (ရသ)၊ မောင်ထွန်းသူ
• ၁၉၈၄ လီယာမင်းကြီး၊ (ရသ)၊ မင်းသုဝဏ်
• ၁၉၈၅ အနာတဟန်၊ (သုတ)၊ စိန်ခင်မောင်ရီ
• ဂေါရီ၊ (ရသ)၊ ပါရဂူ
• ၁၉၈၆ မြန်မာပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ (သုတ)၊ အောင်သန်း(မန္တလေး)
• ၁၉၈၇ ကန္တာရခရီးသည်၊(ရသ)၊ဘုန်းမြင့်(မန္တလေး)
• ၁၉၈၈ ခန်းဆောင်နီအိပ်မက်၊(ရသ)၊ မြသန်းတင့်
• ၁၉၉၂ သုခမြို့တော်၊ (ရသ)၊ မြသန်းတင့်
• ၁၉၉၄ ဘော့ကျန်၊ (ရသ)၊ ရဲမြလွင်
• ၁၉၉၅ အိုဂျေရုဆလင်၊(သုတ)၊ ကျော်အောင်
• အချစ်မိုးကောင်းကင်၊(ရသ)၊ မြသန်းတင့်
• ၁၉၉၆ မင်္ဂလာပါဆရာမ၊(ရသ)၊ တိုက်စိုး
• ၁၉၉၇ ကန္တာရစမ်းရေအိုင်၊(ရသ)၊ မောင်ပေါ်ထွန်း
• ၁၉၉၈ နေဝင်ဘုရင်များ၊ (သုတ)၊ ကျော်အောင်
• ၁၉၉၉ စကားပြောသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၊(သုတ) ကျော်ဇေယျာ(ပုသိမ်)
• ၂၀ဝ၀ မိဘကောင်းတို့ရင်သွေးပြုစုပျိုးထောင်နည်း၊ (သုတ)၊ ပါမောက္ခဒေါ်အေးသန်း
• ဇရာအို၊ (ရသ)၊ ထွန်းမြတ်အေး
• ၂၀ဝ၁ မဒမ်ကျူရီ၊ (သုတ)၊ တင်မောင်မြင့်
• နှလုံးသားထဲမှာအဖြေရှာ၊(ရသ)၊ မြတ်ငြိမ်း
• ၂၀ဝ၂ တတိယကမ္ဘာမှပထမကမ္ဘာသို့၊(သုတ)၊ ဟိန်းလတ်
• ကာရာမာဇော့ညီအစ်ကိုများ၊(ရသ)၊ နတ်နွယ်
• ၂၀ဝ၃ စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှု၏မျက်နှာဖုံး၊ (သုတ)၊ လှိုင်သင်း
• ဝံပုလွေများနှင့်ကခုန်ခြင်း၊ (ရသ)၊ မောင်ထွန်းသူ
• ၂၀ဝ၄ ဦးနှောက်များကိုမီးညှိခြင်း၊ (သုတ)၊ ဘိုးလှိုင်
• တောင်ပံမဲ့သင်းကွဲတေးဆိုငှက်၊ (ရသ)၊ တင်မောင်မြင့်
• ၂၀ဝ၅ အိပ်မက်ခွန်အားဖြင့်ကမ္ဘာကျော်သူ ဟွန်ဒါဆိုးအိချိရော၊ (သုတ)၊ နန်းမြကေခိုင်
• ဘဝအလွမ်းအိမ်၊ (ရသ)၊ မောင်ရဲခိုင်
• ၂၀ဝ၆ ကမ္ဘာပြားပြီ၊ (သုတ)၊ ကျော်ဝင်း
• ကံကြမ္မာအကျဉ်းသား၊ (ရသ)၊ မောင်ပေါ်ထွန်း
• ၂၀ဝ၇ လူ့ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းအရှေ့တိုင်းကရသောအမွေ၊ (သုတ)၊ လှိုင်သင်း
• အနက်ရောင်အိပ်မက်စိမ်းမြမေတ္တာ၊ (ရသ)၊ တင်မောင်မြင့်
• ၂၀ဝ၈ ကျန်ဇီမင်း သို့မဟုတ် တရုတ်ပြည်ကိုပြောင်းခဲ့သူ၊ (သုတ)၊ တော်ကောင်းမင်း
• ပါဝါကျဆုံးခြင်းနှင့်စင်္ကာပူဘဝရနံ့ဝတ္ထုတိုများ (ရသ)၊ ဝင်းထွဋ်ဇော်
• ၂၀ဝ၉ သွေးနှင့်ရေနံ၊ (သုတ)၊ ရဲတင့်
• ၂၀၁၀ အိန္ဒိယကိုတွေ့ရှိခြင်း၊ (သုတ)၊ ဘိုးလှိုင်
• ရေကန်သာကြာတိုင်းအေး၊ (ရသ)၊ နေဝင်းမြင့်
• ၂၀၁၁ နိုင်ငံများ၏ဥစ္စာဓန၊ (သုတ)၊ ဦးကြည်မြင့် (လသာ)
• မျှော်၊ (ရသ)၊ တင်မောင်မြင့်
• ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်မှနေ့ရက်များ၊ (သုတ)၊ မောင်မြင့်ကြွယ်
• ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်၊ (ရသ)၊ တင်မောင်မြင့်
• ၂၀၁၃ အာဏာ၊ (သုတ)၊ ထွန်းတင့်အောင်
• ၂၀၁၄ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုးတိုး၍သာဝင်၊ (သုတ)၊ နတ်မောက်အနီချို
• ကျွန်မမာလာလာ၊ (ရသ)၊ ဟိန်းလတ်
• ၂၀၁၅ ခရီးကန္တာ၊ (သုတ)၊ ညိုအံ့
• ၂၀၁၇ ဟိမဝန္တာခရီးသည်၏ဆေးဘုရားရှာပုံတော်၊ (သုတ)၊ လင်းထက်ဆွေ
• အာရှဝတ္ထုတိုများ၊ (ရသ)၊ တင့်ဇော်
• ၂၀၁၈ မိစ္ဆာကျွန်း၊ (ရသ)၊ ဝေယံဘုန်း
မျှော် (တစ်) လင့်လင့် နဲ့ (တစ်) ထောင့် (တစ်) ညပုံပြင်များစာအုပ်သစ်တွေ ဘာဆုမှ မရပါ။ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖေါက်ပြီး အသစ်ထုတ်စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်။ မလုပ်ကောင်းပါ။
Thant Kyaw Zin ကျေးဇူး။
ဆွိဒီဇင်္ဘာတခုနဲ့ ကာတွန်းတခုကို ဟိုဒ်လုပ်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။ ကွန်မင့်မှာ ဘာအရုပ်လာလာ ဖျက်ပါတယ်။ ဖျက်မယ်လို့ တင်ပြထားတာ အခါတရာ။
ကာတွန်းလည်း ကျွန်တော် မနေ့တမြန်နေ့က တင်ထားပြီးသား။
ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ ဟာသတို့ သတင်းတို့ ကိုယ့်ဆီပြန်ရောက်လာတတ်တယ်။ အဲလိုကစားနည်းကို Boomerang လို့ ခေါ်တယ်။
တခါခါ ဖါးပြုပ်ကိုက်သတင်းက ခလုတ်တိုက်ရာကနေ တရုပ်ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်။
နှစ်တိုင်းပို့ ကြတယ်။ ၂-၃ ယောက်ရှိပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်း တွေ့နေရတယ်။ ဒီဇင်္ဘာ (၁) ရက်နေ့မှာ ဆွိဒီဇင်္ဘာ။
ဒေလီမှာနေစဉ်ကလည်း မြန်မာပြည်က ခရစ်ယန်တွေက ကျင်းပကြတယ်။ အွန်လိုင်းသုတအရတော့ ကရင် ဘက်ပတစ် ခရစ်ယန်တွေ လုပ်တာတဲ့။
ဆွိဒီဇင်္ဘာ အလွန်လှတဲ့စကားစုလေးပါ။ အွန်လိုင်းမှာ ရှာရင်တော့ သြစတေးလျသီချင်း ခေါင်းစဉ်သာ တွေ့တယ်။ အမေရိကမှာ ဆွိဒီဇင်္ဘာကျင်းပတာမရှိပါ။
သင့်စ်ဂစ်ဗင်းနေ့ကိုလည်း တချို့က ခရစ်ယန်ဘာသာရေးနေ့လို့ ထင်နေကြတယ်။ မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းကြောင်းစာ ရေးထားတယ်။
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွတ် မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်အောင် ပညာပေး တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွတ် မဟုတ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွက်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လို့ ရေးရတယ်။
၁။ သား၊ မြေး၊ မြစ်၊ တီ၊ တွတ်၊ ကျွတ်၊ ကျွတ်ဆတ်။
၂။ သား၊ မြေး၊ မြစ်၊ တီ၊ ကျွတ်၊ ဆတ်၊ ဆက်။
၃။ သား၊ မြေး၊ မြစ်၊ တီ၊ မြော့၊ ကျွတ်၊ ကျွတ်ဆတ်။
အဲလိုဟာတွေ နေ့တိုင်းလိုလို တမျိုးပြီးတမျိုး မေးကြတယ်။ ဖြေရတာ အင်မတန် အားနာရတယ်။
the hiv virus ကို လုံးဝသတ်သွားတယ်လို့ဖတ်ရတယ်။ အဲတာ လိမ်တာ။
ပြီးတော့ ငါတို့ အသင်းကလို့ရေးသားခြင်းဟာ ရိုင်းတယ်။
ရောင်းသူတွေ၊ ပွဲစားတွေနဲ့ ဝယ်သူတွေအားလုံးက ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ။ အားနာရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်တွေက ဘယ်လိုပြောပြော ရောင်းရပါတယ်။ ယဉ်ကျေးတာ ရိုင်းတာက စားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတတ်ကြတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစံနစ်အဆင့် ၁၉၀၊ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်လည်း ၁၉၀။
ဆေးရောင်သူများခင်ဗျား ဆောရီး။ ဆရာဝန်တွေက အဲလိုပြောတော့ ပိုပြီးဝယ်ချင်သူတွေလည်း တကယ်ရှိပါတယ်။။
ကွန်မင့်ကနေ ပို့တယ်။ ကျေးဇူး။
အခုခေတ် အတွေ့ရခဲသည့် အရေးသား အချို့ တအုပ်လုံး တနှင့်သာ ရေးသည်။ တစ်နှင့်ရေးသားတာ မတွေ့ရ ဆရာရယ်။
1Q 84 တရုပ်ဝတ္ထုကို Haruki Murakami ရေးပြီး Jay Rubin က အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်။ အခုပို့တဲ့စာက မြန်မာလို ပြန်ထားတာ။ သတ်ပုံမှန်တယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
ဇာလိုက်မင်းသမီးအမည် Aomame အသံထွက်က အေမီနဲ့ ဆင်တယ်။
1Q84。Aomame 1Q84 (with Chinese & English subtitle) https://www.youtube.com/watch?v=eF-SQGyPyDc
ဆရာ ကျမ သိချင်တာလေးရှိလို့မေးခွင့်ပြုပါဆရာ။ လုနာက အသက် ၂၂ ပါဆရာ။ ကြွက်သတ်ဆေးသောက်ပြီး ရောက်လာတာ တရက်ထဲကို ထိုးဆေး Atropine အလုံးပေါင်း ၁၄၇၅ ထိထိုးတယ်ဆရာ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲလောက်ထိ ထိုးရတာပါလဲ။ ဆေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအတေကို သိခြင်ပါတယ်ရှင့်။
တရက်ထဲလို့ရေးတာ မှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ တရက်တည်းလို့လည်းရေးကြ။ သိချင်ပါတယ်လို့ ရေးရ။ အခြေအတွေလို့ရေးရ။
ဘယ်ဆေးမဆို ဗီတာမင်အားဆေးဖြစ်ဖြစ် သတိထားစရာတွေရှိတယ်။ အဆိပ်သင့်တာလာရင် ဆရာဝန်တွေက အသက်ကယ်ရေးကို ပဌမစဉ်းစားကြရတယ်။
Rodenticide Toxicity ကြွက်သတ်ဆေးအဆိပ်သင့်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ Cholinergic crisis after rodenticide poisoning ဖြေဆေးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ခြင်းများကို သုတေသနတွေရှိတယ်။ ဆရာဝန်တွေအတွက်သာ လိုအပ်ပါမယ်။
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်နေရစဉ်က မြို့သာမှာ ပိုးသတ်ဆေးသောက်လူနာတွေကို atropine ဆေးနဲ့ ကုသပေးခဲ့ရတယ်။ မေ့ဆေးမပေမီ လူနာချွဲထွက်တာသက်သာအောင်ပေးတဲ့ဆေးဖြစ်လို့ ဆေးရုံမှာ ၄-၅ လုံးသာရှိတယ်။ အဆိပ်ကြောင့် လူနာတွေ အတော်ဆိုဆိုးဝါးဝါး ခံစားကြရပေမယ့် အဲဒီဆေးက အသက်ကယ်တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ လူနာတယောက်ကို ဆေးအလုံး (၉ဝ) ကျော်ထိုးပေးခဲ့ရဖူးတယ်။ အသက်မသေပါ။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ် ဖြစ်လို့ မန္တလေးဈေးချို မှောင်ခိုဆေးဆိုင်ကနေ ဆေးရှာဝယ်ရတယ်။ မှောင်ခိုဈေး ကျေးဇူးကြီးတယ်။ မဆလ ကြွက်သတ်ဆေးနဲ့တူတယ်။ အဲတာရဲ့မျိုးဆက်တွေက အမည်တမျိုးနဲ့ မဲရရေးလုပ်နေကြတယ်။
မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်နဲ့သာရေးတဲ့ခေတ်မှာ ခုတလောလို့သာ ရေးကြတယ်။
ခုခေတ်တော့ ရွတစ်တစ်တဲ့။ ကန်တော့။
အလွမ်းဖြေမှု၊ လ တခုတည့်
၁၉၆၇ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းပါ မောင်သာရ ရေးတဲ့ ကဗျာ။
၁၉၆၇ မှာ ကျွန်တော် ဆေးကျောင်းရောက်နေပြီ။ မြန်မာစာသတ်ပုံကို မဂ္ဂဇင်းတွေမှာရော ကျောင်းတွေမှာပါ အဲလို မှန်အောင် ရေးသားကြပါတယ်။
၁၉၆၇ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းပါ တင်ထွေး ရေးတဲ့ ဝတ္ထု
ကိုဝင်းမောင် ဆေးရုံမှဆင်းသော ညနေတွင် ကိုလှရွှေတယောက် သေဆုံးသွားတော့သည်။
၁၉၆၇ မှာ ကျွန်တော် ဆေးကျောင်းရောက်နေပြီ။ မြန်မာစာသတ်ပုံကို မဂ္ဂဇင်းတွေမှာရော ကျောင်းတွေမှာပါ အဲလိုမှန်အောင် ရေးသားကြပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် သမီးအမျိုးသားရဲ့အဖေ ၂၂ ရက်နေ့က လေဖြတ်ပါတယ် မနက်စောစော လေဖြတ်ပြီး သွေးတိုးပါတယ် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ဖုန်းဆက်ပြီး ဆေးရုံသွားခိုင်းပေမယ့် အရပ်အ နှိပ်သည်ခေါ် ပြီး လျှာဆွဲခိုင်းပါတယ် ဆေးရုံအတင်းသွားလို့ သွားခိုင်းတဲ့အချိန် ဆေးရုံရောက်တော့ ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်ပြောပါတယ် အဲ့မှာ သွေးယိုစိမ့်တဲ့ လက္ခဏာတွေ့တယ် ပြောတယ် အဲ့တာ သူတို့က မခွဲစိတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ ကြာရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိူး ဘယ်လို ဖြစ်မလဲရှင့် ကုသမှုကရော ဘယ်လို လုပ်ရမှာပါလဲရှင်
လေဖြတ်တာလို့ ခေါ်ကြတဲ့ စထုပ်ခ်ရောဂါဟာ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါဖြစ်တယ်။ Cerebrovascular accident (CVA); Cerebral infarction; Cerebral hemorrhage; Ischemic stroke လို့ခေါ်သေးတယ်။ Brain attack လို့လည်းခေါ်တယ်။ ရောဂါက ဆိုးလွန်းပြီး၊ အဖြစ်လဲ မနည်းလှပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃ဝ အတွင်း ပိုအဖြစ်များလာတယ်။ ၉၅% ဟာ အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ၃ ပုံ ၂ ပုံက ၆၅ နှစ်ကျော်သူတွေ။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မကဖြစ်တာ တွေ့ရတယ်။ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေထက် ဖြစ်နှုန်းမှာ ၂၅% ပိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေသေဆုံးတာမှာ ၆ဝ% ရှိတယ်။ ကင်ဆာ၊ နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ-အဆစ်နာရောဂါ ရှိနေသူတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေး ဖွါးပြီးသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
ဦးနှောက်ကို ပေးပို့နေတဲ့ သွေးကြောလမ်းကြောင်းမှာ တခုခုမှားသွားရင် ဖြစ်လာစေတယ်။ ဦးနှောက်က သွေးမရတာကို စက္ကန့်ပိုင်းထက်ပိုပြီး မခံနိုင်လို့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ သေကုန်တယ်။ ရာသက်ပန်ဖြစ်တယ်။ အဓိက ၂ မျိုးရှိတယ်။
• ကိုလက်စထော များနေတာ၊
• ကိုကိန်းနဲ့ တားမြစ်တားတဲ့ဆေးတွေကို သုံးသူတွေ၊
• အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်ပြီး ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
သွေးခဲကြောင့်ဖြစ်တာမှာလည်း ၂ မျိုးရှိတယ်။ (၁) သွေးလွှတ်ကြောကြီးရောဂါ နဲ့ (၂) Sickle cell anemia သွေးအားနည်းရောဂါကနေ ဖြစ်စေတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို လာပိတ်စေနိုင်တာက အဆီခဲ၊ ကိုလက်စထောနဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗက်တီးရီးယား ဥပမာ Infectious endocarditis နှလုံးရောဂါကနေ လာတာမျိုးကနေလဲ ဖြစ်တယ်။ Atrial fibrillation နှလုံးရောဂါကနေ ဖြစ်တာများတယ်။ Atrial or ventricular septal defect နှလုံးရောဂါတွေကနေလဲ လာမယ်။ Deep vein thrombosis အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောထဲကနေလဲ လာနိုင်တယ်။ အဆို့ရှင်အတုတပ်ထားတဲ့ နှလုံးကသွေးခဲဟာ ဦးနှောက်ကို လာပိတ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲလို တခြားနေရာက လာတာမျိုးအတွက် လာရင်းရောဂါကိုပါ ကုသရမယ်။
သွေးကြောကျဉ်းရာကနေဖြစ်ရင် Atherosclerotic plaque ပလိပ်လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်စေးစေးအရာ ဖြစ်လာတယ်။ ဦးနှောက်ထဲက သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေ အားနည်းလာရင် ပေါက်ထွက်နိုင်တယ်။ သွေးယိုထွက်ပြီး Hemorrhagic stroke ဖြစ်မယ်။
ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ဦးနှောက်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်သလဲအပေါ် မူတည်တယ်။ တချို့မှာ ဖြစ်တာမသိဘဲ နေတတ်တယ်။ ဖြစ်တာက ရုတ်တရက်ဘဲ။ ဖြစ်စ ၁ ရက် ၂ ရက်မှာ ဖြစ်လိုက် ပေါ်လိုက်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပဌမဆုံးအကြိမ်က ခံစားရတာ အပြင်းထန်ဆုံးဘဲ။ ဒါပေမဲ့နောက်ဖြစ်ရင် ဆိုးဆိုးလာတော့မယ်။
• မျက်ခွံအောက်ကျနေမယ်၊ မျက်စိလှုပ်မရ၊ သူငယ်အိမ်ဟာ အလင်းရောင်ကို တုန့်ပြန်တာ နှေးမယ်၊ မျက်စိ အကြည့်ရခက်မယ်၊
သွေးခဲကြောင့် ဖြစ်တာအတွက် သွေးကျဲဆေးဖြစ်တဲ့ Heparin or Warfarin (Coumadin) ဆေးကိုလဲ သုံးတယ်။ Aspirin နဲ့ Clopidogrel (Plavix) တွေကိုလဲ ပေးနိုင်တယ်။ သွေးခဲပိတ်လို့ဖြစ်ရင် အချိန်လဲ မီမယ်ဆိုရင် Thrombolysis သွေးခဲကို ချေဖျက်နည်းနဲ့ Thrombectomy ခွဲစိတ်နည်းတွေ လုပ်နိုင်တယ်။ ဆေးပေးနည်းမှာ Aspirin, Clopidogrel, Dipyridamole ဆေးတွေကို Platelets သွေးမှုံတွေစုပြီး သွေးမခဲအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Thrombolysis ဆိုတာ ဆေးနဲ့ သွေးခဲကို ချေဖျက်နည်း ဖြစ်တယ်။ tissue Plasminogen Activator ဆေးမျိုး သုံးတယ်။ ချက်ချင်းဖြစ်တာအတွက် သုံးသင့်-မသင့် အယူအဆ မတူကြဘူး။
သွေးယိုတာအတွက် ခွဲစိတ်နည်း သုံးလို့ရတာလဲ ရှိတယ်။ Carotid artery လည်ပင်းသွေးလွှတ်ကြောကို ခွဲစိတ်ရတာလဲ ရှိတယ်။ Mechanical thrombectomy စက်သုံးနည်းလဲ ရှိတယ်။ ချက်ချင်းဖြစ်တာအတွက် သုံးတယ်။ ပေါင်ခြံက သွေးလွှတ်ကြောထဲကို ပိုက်ငယ်လေးတခု ဦးနှောက် သွေးပေးစနစ်ထဲအထိ ထိုးသွင်းရတယ်။ Corkscrew-like device ကရိယာလေးကနေ သွေးခဲကို ဆုပ်ယူစေမယ်။ Angioplasty and stenting နည်းဆိုတာကလဲ ချက်ချင်း ဖြစ်တာကို သုံးတယ်။
ခေါင်းထဲမှာ သွေးယိုတာဖြစ်ရင် Neurosurgical evaluation လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရမယ်။ သွေးယိုတဲ့ အကြောင်းကို ရှာပြီး ကုသရမယ်။ ခွဲစိတ်တာ သိပ်မလိုတတ်ဘူး။ သွေးတိုးရှိနေချိန်မှာ သွေးကျဆေး ပေးရတယ်။ တချို့က အစာအာဟာရနဲ့ အရည်ဖြည့်ပေးဘို့ လိုမယ်။ ဆေးကုတာအပြင် ဖီဇီကယ်သာရာပီ၊ စကားပြောနည်း၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုသနည်း၊ အစာမျိုနည်းတွေလဲ လိုနိုင်တယ်။ ရေရှည်အတွက် ဆက်လုပ်ပေးရတယ်။ ပြန်ပြီး နလံထရေးနဲ့ နောင်မဖြစ်အောင်အတွက် လုပ်ရတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဆင်တူတိုင်းတော့ Stroke မဟုတ်ပါ။ Brain tumor ဦးနှောက်ကင်ဆာ၊ Subdural hematoma ဦးနှောက်အဖုံးလွှာအောက်မှာရှိတဲ့သွေးခဲ၊ Brain abscess ဗက်တီးရီးယား၊ မှိုကနေဖြစ်စေတဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ပြည်တည်နာ၊ Viral encephalitis ဗိုင်းရပ်စ် ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ တချို့ဆေးတွေ များသုံးတာ၊ Sodium, Calcium, Glucose ဓါတ်ဆားတွေ နည်းသွားတာတွေကနေ ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်တတ်တယ်။
Silent stroke လူမသိသူမသိဖြစ်ခြင်း
3. ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့၊ ကိုလက်စထော ထိန်းပါ၊ သွေးတိုးထိန်းပါ၊ ဆီးချိုထိန်းပါ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် တနေ့ နာရီဝက်လုပ်ပါ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပါ၊ အရက်ဖြတ်ပါ-လျှော့ပါ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြတ်ပါ၊
4. အစာအဟာရ မျှတပြည့်စုံပါစေ။ အသီးအရွက်၊ အသီးအနှံစားပါ၊ အဆီး-အချို-အငန် လျှော့စားပါ၊ အဆီလွတ်အသား စားပါ၊ နို့ထွက်အစာတွေ လျှော့ပါ၊ ဆိုင်ဝယ်စား အစာတွေ သတိထားပါ၊ Saturated fat, Partially-hydrogenated နဲ့ Hydrogenated fats တွေ သတိထားပါ။
5. ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ပါ၊
အမျိုးအစား၊ ဘယ်လောက်ပျက်စီးသွားခဲ့သလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေကို ထိခိုက်သွားသလဲ၊ ဆေးကုသမှုကို ဘယ်လောက် မြန်မြန်ရခဲ့သလဲ ဆိုတာတွေအပေါ် မူတည်ပြီး -
ဆရာ ကလေးက ၄ နှစ် မိန်းကလေးပါ အဖြူ အရမ်းဆင်းနေတာ အလေးသွားရင်လဲ အဖတ်ဖတ် မြင်ရတယ် ကလေးအထူးကုဆီပြပြီး og လွဲပေးတယ် og က စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး ပြောတယ် အဖြူက ဆင်းတုန်းပဲ ဆရာ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ ဆရာ။
Metronidazole gels, creams, lotions မက်ထရိုနိုက်ဒါဇောလ် လိမ်းဆေး၊ ထည့်ဆေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်။
Metronidazole Topical gel (0.75%, 1%)
Metronidazole Cream or lotion (0.75%)
Metronidazole Vaginal gel (0.75%, 1.3%) တခုခုသုံးနိုင်တယ်။
Personal hygiene for women အမျိုးသမီးများ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/personal-hygiene-for-women_19.htmlVaginal
ဆရာ မေးချင်လို့ရှင့် ဒီနေ့ ဆေးရုံသွားပြတာ ဟော်မုန်းတွေ လည်ပင်းဘက်နားရောက်နေတတ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်ဆရာ ကလေး မရတတ်ပူးလို့လည်း ပြောခဲ့တယ်ဆရာ ဘယ်လိုလုပ် အဲ့လိုဖစ်တာလဲ ဆရာ
ဆေးရုံသွားပြသူ အသက် မသိ။ ရာသီ မသိ။ အိမ်ထောင်ရေး မသိ။
မရတတ်ပူး မဟုတ်။ မရတတ်ဘူးလို့ ရေးရ။ ပူးဆိုတာ အမြွာပူး။ ပူးသတ္တဝါ။ ပူးသတ်သည်။
ဖစ် မဟုတ်။ ဖြစ်လို့ရေးရ။ ဦးဖစ်၊ ဒေါ်ဖစ်၊ ဖစ်လမ်းလို့သာရှိတယ်။
(ဦး) ဘဂျမ်းခေတ်နဲ့ အခုခေတ် စာရေးတာလည်း မတူ။ အဲလိုလူ နားထောာင်သူ မရှိ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကတော့ အဲလိုလူတွေနောက် လိုက်ကြတယ်။ မဲပေးချင်သူလည်း အတန်အသင့် ရှိသေးတာ။
ဆရာရှင့် သမီး သားအိမ်နား အရမ်းနာနေလို့ ဆရာဝန်သွားပြလိုက်တာ အခုပဲအိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ OG က သားအိမ် နည်းနည်း ရောင်နေတယ်ပြောပါတယ်။ Erythromycin 500 mg 1-1 for2weeks Relispa 1-1 for3days Etoshine 1-1 for3days သောက်ခိုင်းပါတယ်ရှင့်။ Erythromycin 500 mg ဆေးအကြောင်း ရှင်းပြပေးပါရှင့်ဆရာ။ ဘာကြောင့် အဲ့ဒီ့ဆေးကို အဲ့လောက်အကြာကြီး ၂ ပတ်တောင် သောက်ခိုင်းရတာပါလဲရှင့်။ ဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိရင်ပြောပြပေးပါ ဆရာရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
အရစ်သရိုမိုင်စင်ဟာ Macrolides မက်ခရိုလွိုက်အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်တယ်။ Azithromycin, Clarithromycin, Erythrocin, Tyhromycin, E-mycin ဆေးတွေကလည်း အုပ်စုတူဆေးတွေဖြစ်ကြတယ်။
• လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ (ကလာမိုင်ဒီးယား) ကြောင့် ဆီးပြွန်အဝရောင်ခြင်း = Erythromycin 250-500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊
• နားကိုက် = Erythromycin 50 mg/kg/day + Sulfonamide 150 mg/kg/day x ၁ဝ ရက်၊
• နူမိုးနီးယား = Erythromycin 500 mg IV တနေ့ ၄ ကြိမ်၊
• လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား၊ အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ = Erythromycin 500 mg
• ဆစ်ဖလစ် ပဌမဆင့်၊ ဒုတိယဆင့်၊ တတိယဆင့် = Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ x ၂ ပါတ်၊
• ကျား-မ ဆီးပြွန်-မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ် ရောင်ခြင်း = Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၂၁ ရက်၊
• လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ရှန်ကာရွိုက် = Erythromycin, 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၇ ရက်၊
• နားပြည်ယိုခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက် ရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ် ရောင်ခြင်း၊ ဂနိုရီးယား၊ အစာခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ မွေးစကလေးငယ်များ နှလုံး အလုပ်မနိုင်ခြင်း = Erythromycin လူကြီး 250-500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ တနေ့4Gm ထက်မပိုရ။ ကလေး 15-25 mg/kg ½ -2လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက်၊ 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက်၊ 18.75 mg/kg တနေ့ ၄ ကြိမ်။
အနီပြင်ထွက်၊ ကိုယ်ပူ၊ အသားဝါ၊ ပျို့-အန်-ဝမ်းပျက်- ဗိုက်နာ၊ နားကိုထိခိုက်၊
သမတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ ကြိုတင်ပြောမထားပဲ သင့်စ်ဂစ်ဗင်းနေ့မှာ အာဖကန်နစ္စတန်က အမေရိကန်တပ်ဖွဲတွေဆီ ရောက်ခဲ့တယ်။
အာဖကန်စ္စတန်နဲ့ ယူအက်စ်အေတို့ရဲ့ ပြိုင်မှုက ၁၁-၉-၂၀၀၁ နေ့မှာ နယူယောက်မြို့က ကုန်သွယ်ရေးတာဝါကြီး နှစ်ခုကို လေယာဉ်တွေနဲ့ ဖျက်ဆီးခဲ့တာကနေ စတင်ပါတယ်။ အမေရိကန်လူမျိုး ၂၉၇၇ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
အိုဆာမာဘင်လာဒင် လက်ချက်။ သူက အယ်လ်ကိုင်ဒါ အစ္စလားမစ် အုပ်စုခေါင်းဆောင်။ အာဖကန်စ္စတန်မှာ ခြေချထားတဲ့ တာလီဘန်အဖွဲ့က သူ့ကိုအကာအကွယ်ပေထားတာ။ ဘင်လာဒင်ကို လွှဲပေးခိုင်းတာကို ငြင်းဆန်ကတည်းက တိုက်ပွဲတွေ စတယ်။ ၇-၁၀-၂၀၀၁ ကနေ ကနေ့အထိ။ အမေရိကန်ရဲ့ မဟာမိတ်တွေကပါ လေကြောင်းတိုက်ပွဲမှာ ပါကြတယ်။ လေကြောင်းကနေ ဗုံးတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နေစဉ် အာဖကန်အစိုးရ ပြုတ်မကျအောက်လည်း လုပ်ရသေးတယ်။ တာလီဘန် ကျဆင်းသွားတယ်။ ပျောက်ကွယ်သွားတာတော့ မဟုတ်ပါ။
၁၈ နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ တိုက်ပွဲရည်မှန်းချက် မရောက်နိုင်သေးပါ။ ၁၉၉၆ အထိ တာလီဘန်တွေက ကာဗူးလ်မြို့တော်အထိ နေရာယူထားနိုင်ခဲ့တယ်။ အာဖကန်တိုင်ပြည်ထဲ နေရာအတော်များများကို အုပ်စီးထားနိုင်ခဲ့တယ်။ လူမြင်ကွင်းမှာ ပြန်ပေးဆွဲသူတွေကို သတ်ဖြတ်စီရင်ပြခဲ့တယ်။ ဘိန်းနဲ့ မူးယစ်ဆေး ကုန်သွယ်မှု၊ ရေနံတွင်းနဲ့ အခွန်ကောက်တာတွေကနေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရခဲ့ကြတယ်။
၂၀၁၄ မှာ နေတိုးအဖွဲ့က စစ်ဆင်ရေးတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ အာဖကန်အစိုးရကသာ တာလီဘန်ကို ဆက်တိုက်နေရတယ်။ အဲတော့ အာဖကန်မှာ တာဘီဘန်တွေ ခြေကုပ်ပြန်ယူလာကြတယ်။
ယူအက်ကမတိုက်ခင် နှစ် ၂၀ ကလည်းက အဖာကန်မှာ စစ်ပွဲတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ ဆိုဗီယက်တပ်တွေ ဝင်ပြီး ကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုကူညီတာကနေ စတယ်။ မူဂျာဟစ်ဒင်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ယူအက်စ်၊ ပါကစ္စတန်၊ တရုပ်နဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတို့က ထောက်ခံကူညီကြတယ်။
၁၉၈၉ မှာ ဆိုဗီယက်တပ်တွေ ပြန်ရုပ်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်။ တာလီဘန် ပေါ်လာတယ်။ သူတို့ပေါ်ကာစ ၁၉၉၄ မှာ ပါကစ္စတန်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်မှာ။ အမှန်က တာလီဘန်ဆိုတာ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှာရှိတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အစ္စလမ် ဘာသာသင် ကျောင်းတွေကဖြစ်တယ်။ သူတို့က ရှာရီယာဥပဒေလိုက်တယ်။ ဘင်လာဒင်ကလည်း ဆော်ဒီနိုင်ငံသား။ ဘင်လာဒင်ဟာ ပါကစ္စတန်မှာ စီးနင်းသတ်ဖြတ်ခံရတယ်။
၂၀၀၉ ဘာရက်ကိုဘားမားလက်ထက် အာဖကန်မှာ အမေရိကန် စစ်သား တသိန်းထိထားခဲ့တယ်။ အဲတာကြောင့်သာ တာလီဘန်တွေ ထွက်ပြေးရတာ။ အခုတော့ တာလီဘန်တွေက ပါကစ္စတန်မှာ ခိုလှုံနေကြရပြီ။ ဆူဆိုဒ်နည်းနဲ့ ဆက်ပြီးလုပ်ကြတယ်။
အာဖကန်စစ်သား ဘယ်လောက်ထိသေပြီးသလဲ။ အာဖကန်သမတ အဆိုအရ ၂၀၁၄ ကနေ ရေတွက်ရင် ၄၅၀၀၀ သေပြီတဲ့။ နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့ပေါင်း ၃၅၀၀ သေပြီ။ အမေရိကန်စစ်သား ၂၃၀၀ ပါတယ်။ ယူအင်အဆိုအရ အရပ်သားပေါင်း ၃၂၀၀၀ သေဆုံးပြီးပြီးပြီ။ နောက်လေ့လာမှုတခုအရ ၄၂၀၀၀ သေသတဲ့။ အဲဒီ နောက်လေ့လာမှုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အဆိုအရ ၂၀၀၁ ကနေတွက်ချက်ရင် အီရတ်၊ ဆီးရီးယား၊ အာဖကန်နဲ့ ပါကစတန်တို့ဟာ စစ်ပွဲတွေကြောင့် $5.9 ထရီလီယန် ကုန်ကျခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသတဲ့။
စစ်ပွဲကိုတိုက်နေတဲ့ တတိယမြောက် အမေရိကန်သမတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် လက်ထက်မှာလည်း လေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေ ဆက်လုပ်တယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရာမှာ အမေရိကန်တပ်သားဦးရေ လျှော့ချမယ်ပြောတယ်။ နိုင်ငံတကာအမြင်အရ အဲလိုသာ အမေရိကန်တပ်တွေနည်းရင် လေဟာနယ်ဖြစ်ပြီး စစ်သွေးကြွတွေ ထပ်ပြီး စခန်းထကြဦးမယ်။ အာဖကန်အရပ်သားတွေကတော့ ဆက်ပြီးပေးဆပ်နေကြရပါလိမ့်မယ်။ ဆောရီး။
အခုထိ တာလီဘန်တွေက တနှစ်မှာ $1.5 ဘီလီယန်ဝင်နေကြတယ်။ ဘန်းမည်းနဲ့ ဘိန်းဖြူကနေ အများဆုံးရတယ်။ အခွန်လည်းကောက်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးတွေလည်းရှိတယ်။
အာဖကန်စ္စတန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာ ဗိုလ်လုနေကြတယ်။ သူတို့က ဘိန်းမှာ သာတယ်။ ကျွန်တော်တို့က စိတ်ကြွဆေးမှာ သာတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ဘိန်းက ဆွေမျိုးအရင်းတွေ။ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးစုအရေးက တဝမ်းကွဲတွေ။
မြေပုံက အာဖကန်မှာရှိတဲ့ ဘိန်းခင်းတွေ။ အရောင်ရင့်လေ ဘိန်းခင်းထူထပ်လေ။
ဂျာနယ်တခုက သတင်းထင်ပါတယ်။ သေချာ မသိပါ။ သတ်ပုံမှန်လို့ ကူးတင်ပါရစေ။
ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ထီထိုးသူတွေ ထီပေါက်ကြပါစေသတည်း။
၁။ ဖြစ်တဲ့သူက အသက် ၆၁ နှစ်ပါ အရေပြားလေးဘက်နာအကြောင်းလဲ တင်ပေးပါဆရာ တခါမှမကြားဖူးထားသေးလို့ပါ
၂။ အရင်က ကျွန်တော်မကြားဖူးသောရောဂါအကြောင်းလေးမေးပါရစေ။ ကျွန်တော့်တူမလေး အသက် ၂၄ နှစ်၊ လေးဘက်နာဖြစ်တာ ၃နှစ်လောက်ရှိပြီဆရာ။ အစကတော့ရိုးရိုးလေးဘက်နာလို့ပဲသိခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လ လောက်ကမှ အရေပြားလေးဘက်နာမှန်းသိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆေးတော်တော်ကုပြီးပါပြီ။ မသက်သာဘူးဆရာ။ အရေပြားလေးဘက်နာရောဂါရဲ့အကြောင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါဆရာ။
အရေပြားလေးဘက်နာ အရပ်ခေါ်အသုံးကို ခဏခဏမေးကြတယ်။ ဆရာဝန်တွေမှာ ခေါင်းရှုတ်ရပါတယ်။ ရောဂါဗေဒမှာ Rheumatic Manifestations of Skin Disease လို့တော့ရှိပါတယ်။ ရူမက်တစ်ရောဂါကနေ အရေပြားကို သက်ရောက်တာတွေကို ခေါ်ပါတယ်။
၁။ Rheumatoid Arthritis ရူမတွိုက် အဆစ်နာ၊
၂။ Rheumatoid Nodules ရူမတွိုက် အကျိတ်၊
၃။ Rheumatoid Vasculitis ရူမတွိုက် သွေးကြောရောင်ခြင်း၊
၄။ Granulomatous Dermatitis အရေပြားရောင်ခြင်းတွေရှိတယ်။
ဖြစ်စေနိုင်တာတွေကတော့ TNFa ဆေးနဲ့ Interferon ဆေးတွေကနေ Cutaneous lupus အရေပြား (လူးပတ်စ်) ရောဂါကို အစပျိုးစေတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။ Rheumatoid arthritis လေးဘက်နာအဆစ်ရောင် ရောဂါနဲ့ Cutaneous lupus erythematosus (CLE) ရောဂါ၊ (SLE) ရောဂါ၊ Dermatomyositis ရောဂါနဲ့ Systemic sclerosis ရောဂါတွေက ဆင်တယ်။
ဆေးကုရတာ အင်မတန်ခက်တယ်။ မထိရောက်တာကများတယ်။
- Topical corticosteroids နဲ့ Calcineurin inhibitors လိမ်းဆေးတွေက ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အရေပြားကနေ စုပ်ယူတာနည်းလို့ အကျိုးဖြစ်တာသိပ်မသိသာဘူး။
- Phototherapy အလင်းရောင်ပေးကုသနည်းကနေ အရေပြားကို နူးညံ့စေနိုင်တယ်။ ထူနေတာ ပါးလာစေနိုင်တယ်။
- နေရောင်ရှောင်ရမယ်။ Sunscreens နေလောင်ခံသုံးရမယ်။ သူတို့မှာ နေရောင်ရတာနည်းလို့ ဗီတာမင်ဒီနည်းနေမယ်။ ဗီတာမင်ဒီ ဆေးသောက်ရမယ်။
- Topical calcineurin inhibitors ဆေးလိမ်းနိုင်တယ်။
- Hydroxychloroquine <6.5 mg/kg/day ဆေးပေးနိုင်တယ်။
- Quinacrine 50–100 mg/day ဆေးပေးနိုင်တယ်။
- Antimalarial ငှက်ဖျားဆေးလည်းသုံးတာများတယ်။
- Thalidomide ဆေးကိုလည်းသုံးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဆိုးတယ်။
- Systemic immunosuppressive agents လို့ခေါ်တဲ့ ခုခံအားစနစ်ကိုသက်ရောက်စေတဲ့ဆေးတွေ ဥပမာ Corticosteroids, Methotrexate, Cyclophosphamide နဲ့ Cyclosporine ဆေးတွေပေးရင် တိုးတက်လာတာ တွေ့ရတယ်။
- D-penicillamine ဆေးကိုတော့ ဆရာဝန်တွေအမြင်မတူကြပါ။
- Mycophenolate mofetil နဲ့ Corticosteroids တွဲပေးနည်းကို မကြာခင်ကစမ်းသပ်တော့ တိုးတက်မှုရှိတာတွေ့တယ်။
- အရေပြားမှာဖြစ်တာတွေအပြင် သွေးကြောမှာဖြစ်လာလည်းရှိတယ်။ အနာပေါက်တယ်။ ကုသရတာခက်တယ်။ Intravenous iloprost ထိုးဆေးကို အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။
ရောဂါပြီးစနစ်ကမောက်ကမဖြစ်လို့ဒီလိုရောဂါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်နေရင် ကိုယ်ပိုင်အရာတွေကို ရန်သူလို သဘောထားပြီး တိုက်ထုတ်နေတော့မယ်။ သွေးထဲမှာ Autoantibodies အောတိုအင်တီဘော်ဒီတွေရှိနေမယ်။
Rheumatic diseases ရူမက်တစ်ရောဂါတွေထဲမှာ rheumatoid arthritis ရူမက်တစ်အဆစ်နာ (လေးဘက်နာ)၊ lupus (လူးပတ်စ်) ရောဂါ၊ dermatomyositis အရေပြားနာတမျိုးနဲ့ scleroderma အရေပြာမရောဂါတွေပါဝင်တယ်။
ရောဂါအမည်တပ်နိုင်အောင် ANA, C&P ANCA, LP, and CFS စစ်ဆေးနည်းတွေလုပ်နိုင်တယ်။
Corticosteroids ကော်တီကိုစတီရွိုက်ခေါ် Steroids စတီရွိုက်ဆေးတွေကနေ ရောဂါပြီးစနစ်ကို နှိမ်ထားပေးလို့ သုံးရတယ်။ ဥပမာ Prednisone ဆေး။ ရေရှည်သုံးရင် ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေကိုတော့ သတိထားရမယ်။ Methotrexate ဆေးကိုလည်းသုံးတယ်။ အရေပြားမှာဖြစ်တာတွေကို sunscreens နေလောင်ခံဆေး၊ cortisosteroid-containing ကော်တီကိုစတီရွိုက်ပါလိမ်းဆေးတွေက အကျိုးမရှိတာများတယ်။ lupus skin disease ဆိုရင်တော့ အဲလို လိမ်းဆေးတွေက အထောက်အကူပေးနိုင်တယ်။ စားဆေးပါပေးရတယ်။ hydroxychloroquine ငှက်ဖျားဆေးလည်းပေးနိုင်တယ်။
တကိုယ်လုံးမှာ လူးပတ်စ်ဖြစ်တာကို (SLE) လို့ခေါ်ပြီး အရေပြားမှာသာဖြစ်တာကို Cutaneous Lupus Erythematosus (CLE) လို့ခေါ်တယ်။ အရေပြားမှာဖြစ်တာကို Sunscreens နေလောင်ခံလိမ်းနိုင်တယ်။ နေရောင်ကိုရှောင်ရမယ်။ Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) ပေးရမယ်။ Calcineurin inhibitors ဆေးလိမ်းနိုင်တယ်။ အမာရွတ်ဖြစ်စဉ်ရှိတဲ့ ဆိုးတဲ့သူကို hydroxychloroquine <6.5 mg/kg/day ပေးတယ်။ quinacrine 50–100 mg/day ဆေးကိုလည်းတွဲပေးတတ်တယ်။ ငှက်ဖျားဆေးပေးရင် ၆၁% သက်သာတာတွေ့ရတယ်။ Lenalidomide ဆေးကိုစမ်းသုံးနေတယ်။ Thalidomide ဆေးကိုလည်းသုံးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသတိထားရမယ်။ sensory axonal neuropathy အာရုံကြောထိခိုက်နိုင်တယ်။
Scleroderma အရေပြားမာတာကို corticosteroids နဲ့ calcineurin inhibitors လိမ်းဆေးတွေသုံးနိုင်တယ်။ Phototherapy အလင်းရောင်ပေးနည်းလည်းသုံးတယ်။ Systemic immunosuppressive agents ခုခံအား နှိမ်ဆေးတွေလည်းသုံးရတယ်။ corticosteroids, methotrexate, cyclophosphamide နဲ့ cyclosporine ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ D-penicillamine ဆေးထိရောက်မှုကိုငြင်းခုန်နေတယ်။
Rheumatoid Arthritis လေးဘက်နာ၊ Rheumatoid Nodules လေးဘက်နာအကျိတ်တွေရှိသူတွေထဲက RA စမ်းတွေ့သူ ၂ဝ-၃ဝ% ရှိတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာပိုများတယ်။ leflunomide, methotrexate, TNF-inhibitors နဲ့ aromatase inhibitor (ရင်သားကင်ဆာဆေး) တွေပေးနိုင်တယ်။ Rheumatoid Vasculitis လေးဘက်နာသွေးကြောရောင်တာလည်း ရှိတယ်။ Interstitial granulomatous dermatitis (IGD) ကျောက်ကပ်ရောင်တာလည်းရှိတယ်။ NSAIDS, prednisone, dapsone, colchicine, oral tacrolimus နဲ့ TNF-inhibitors ဆေးတွေပေးတယ်။
- Multiple sclerosis မာလ်တီပယ် စကယ်လရိုးဆစ်
- Pregnancy and Rheumatism ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် လေးဘက်နာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-rheumatism.html
- Rheumatic skin disease အရေပြားလေးဘက်နာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/rheumatic-skin-disease.html
- Rheumatism (1) လေးဘက်နာ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/rheumatism-1.html
- Rheumatism (2) လေးဘက်နာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/rheumatism-2.html
- Scleroderma (စကယ်လရိုဒါးမား) အရေပြားမာတဲ့ရောဂါ
- SLE ထူးခြားတဲ့ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sle.html
- Systemic Sclerosis စကယ်လယ်ရိုးဆစ်ရောဂါ Systemic Sclerosis
ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့်။ ကျွန်မအသက် ၃၃ နှစ်ပါ။ ကလေးနှစ်ယောက် အမေပါရှင်။ ကျွန်မ ဆီးကျင်နေတာ ငါးရက်လောက် ရှိပါပြီ။ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ အစပ်များတဲ့ အစာတွေ စားခဲ့မိပါတယ် ဆရာ။ အရင်က ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်နဲ့ သကြားစိမ်သောက်ရင် ပြန်ကောင်းပါတယ်ဆရာ။ ခုက ပြန်မကောင်းသေးဘူး ဆရာ။ ဒီနေ့ ဆေးခန်းပြပါတယ်ရှင့်။ အခု ဆေးသောက်ထားပေမဲ့ ဆီးစပ်က အရမ်းကို ကိုက်နေပါတယ်။ သက်သာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆရာ။ ရေခဲကပ်၊ ရေနွေးကပ် မရပါဘူး ဆရာ။ ဆီးလည်း နည်းနည်းစီ ခဏခဏသွားနေပါတယ်။ ဆီးအရောင်မပြောင်း၊ သွေးမပါ၊ မချမ်းမတုန်၊ မဖျားပါဘူး ဆရာ။ ဆီးစပ်က တအားကိုက်နေလို့ပါရှင့်။
Women and Urinary Tract အမျိုးသမီးနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/women-and-urinary-tract.html
တစ်အားလို့ရေးတာကို ပြင်လိုက်တယ်။ စီးစပ်နဲ့ နဲနဲဆီကိုလည်း ပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာက ပိုးနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ဖြစ်ပြီးမှသာ ဆီးအက်စစ်ဓါတ်များတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ မသင့်တာဖြစ်တယ်။ အစားကြောင့် ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ မဖြစ်စေနိုင်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ ရေခဲကပ်တာ နည်းနည်းသက်သာပါတယ် ဆရာ။
ဆီးစပ်ကိုက်တာ နည်းနည်း သက်သာတာပါ ဆရာ။ ဆီးကတော့ ခဏခဏ သွားနေရပြီး ၊ အစပိုင်းဆီးက အဆင်ပြေပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဆီးကတော့ နာကျင်ပါတယ် ဆရာ။ ကိုက်တာ နည်းနည်း သက်သာလို့ နေလို့ အဆင်ပြေပါတယ် ဆရာ။
ကျေးဇူးပါရှင်။ ဆရာ ပေးတဲ့ link လေးတွေ လိုက်ဖတ်နေပါတယ်။
ဆီးအိမ်ဝင်နေရင် ပိုးသေဆေး လိုတယ်။ ပိုးကျန်နေသူ နာတာရှည်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးအိမ်အထက်တက် ရောင်နိုင်တယ်။ ကျောက်ကပ် သတိထားရ။ အမျိုးသမီးတွေ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ အတော်ကို အဖြစ်များတယ်။ ထပ်လည်းဖြစ်ကြတယ်။ အမေရိကားမှာ လေ့လာမှုလုပ်တော့ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်းက အပြင်လူနာဌာနကိုလာပြတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေထဲမှာ အများဆုံး။ အသက် ၁၄ နှစ်ကနေ ၂၄ နှစ်တွေမှာ အဖြစ်အများဆုံး။ အရွယ်မရွေးဖြစ်တယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်ကျော် အမျိုးသမီးတွေမှာ ၂၀% ရှိတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၅၀% ကျော်မှာ တသက်မှာ တခါတော့ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ ဖြစ်တယ်။
ကန်တော့။ အမျိုးသမီးတွေ မင်္ဂလာဆောင်စမှာ ဟန်းနီးမွန်းဆစ်စတိုက်တစ် ခေါ် ဆီးအိမ်ပိုးဝင်တာဖြစ်ကြတယ်။ အတူနေဖူးစ မိန်းကလေးတွေမှာလည်း ဖြစ်ကြတယ်။
ဆေးလိုတာကို ဆေးနဲ့မှသာ ပျောက်စေသင့်တယ်။ ဆီးလမ်းမှာဖြစ်တာ ဆီးအက်စစ်ဓါတ်နည်းစေရင် သက်သာတယ်။ ပိုးကို ကိုယ့်ခုခံအားစနစ်က သေစေရင်တော့ ကောင်းတယ်။ မသေရင် ဆီးအိမ်ကနေ အထက်တက်ပြီး၊ ကျောက်ကပ် ရောင်နိုင်တယ်။
ကျွန်တော်က ဆေးပညာစာရေးတွေမှာ ခြောက်လှန့် မရေးပါ။ ဆေးတွေ ဝယ်ချင်လာအောင်လည်း ဆွဲဆောင်ပြီး မရေးပါ။
4. Hematuria ဆီးထဲသွေးပါခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/hematuria-causes.html
5. Honeymoon Cystitis ဟန်းနီးမွန်းမှာ ဆီးအောင့်တာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/honeymoon-cystitis.html
9. Kidney Stones Home Remedies ကျောက်တည်တာသက်သာအောင် အိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/kidney-stones-home-remedies.html
10. Kidney stones ကျောက်ကပ်-ကျောက် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/kidney-stones.html Kidneys ကျောက်ကပ်ကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ခြင်း
11. Nephritis ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/nephritis.html
14. Sulfamethoxazole and trimethoprim ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/sulfamethoxazole-and-trimethoprim.html
15. Urinary Tract Infection ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/urinary-tract-infection.html
16. Urinary Tract Infections in Children ကလေးဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/08/urinary-tract-infections-in-children.html
17. Warning Signs Of Kidney Failure ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းလက္ခဏာလေးခု https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/warning-signs-of-kidney-failure.html
18. Women and Urinary Tract အမျိုးသမီးနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/women-and-urinary-tract.html
19. World Kidney Day ကမ္ဘာ္ဘ့ကျောက်ကပ်နေ့ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/world-kidney-day.html
ဖေ့စ်ဘွတ် ကွန်မြူနတီ စတင်းဒက်ဆိုတာ စတင်းဒက် မရှိပါ
ဖေ့စ်ဘွတ် ကွန်မြူနတီ စတင်းဒက်အရ Sigmoiditis အူမကြီးတနေရာရောင်ခြင်း လင့်ကိုလည်း ပို့မရတဲ့။
အခုပို့စ်တွေက ကွန်မြူနတီစတင်းဒက်နဲ့ မညီတဲ့
1. Air pollution လေထုညစ်ညမ်းမှု
2. Bone tuberculosis အရိုး တီဘီ
3. Hernia အူကျ-မကျ သိပါရစေ
4. HIV Tests စမ်းသပ်နည်းများ
5. Low Back Pain ခါးနာ
6. Muscle twitch ကြွက်သားလှုပ်ခြင်း
7. Stroke Emergency Treatment ဆထုပ် အရေးပေါ်ကုသခြင်း
8. Vaccine Reactions ကာကွယ်ဆေး တုန့်ပြန်မှု
9. နတ်ရေကန်ရှိတဲ့ဘုံ ရန်ကုန်
10. အားဆေးတေ အဖုလေးတေ ချိုင်းကြားတေ ပေါင်ကြားတေ ဆေးခန်းတေ သွားဖုံးတေ
အဲတာတွေသာမက ရှိသေးတယ်။ နားကိုမလည်နိုင်။ ဘလော့ခံရတာ ၄-၅-၆ ခါရှိပြီ။ အစက ၂၄ နာရီ ဘလော့တယ်။ နောက် ၃ ရက်။ နောက် တပတ်။ မနှစ်က မြန်မာပြည်အလည်ပြန်စဉ်က တလတိတိ ဘလော့တာ ခံရတယ်။ နောက်တကြိမ် ဘယ်တော့ ဘလော့မလဲ မသိ။ ဖေ့စ်ဘွတ် အရံတခုလုပ်ထားရတယ်။ လူသိနည်းတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ သုတစာတွေတော့ ဘလော့မခံရ။ ဆေးပညာစာတွေကိုသာ ဘလော့တယ်။
အသက် ၂၉ပါ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် အသားစစစ်တဲ့အဖြေကရောဆရာ ကင်ဆာအဖြစ်ပြောင်းလာနိုင်လား ထပ်ပွားလာနိုင်လားဆရာ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ပြီး အသားစအဖြေပါဆရာ ကျမဖြစ်တဲ့အသားပိုက ကင်ဆာအဖြစ် ပြောင်းနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားလား နောက်ထပ် ပွားလာနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားလားဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါဆရာ
• ဆရာရှင့် အသက် ၂၈။ အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးပါ။ ဝမ်းသွားပြီးလည်း ကျန်သလိုခံစားရပါတယ်။ ၃ ရက်ရှိပါပြီ။ ဒီနေ့ဝမ်းလျှောသလိုဖြစ်ပြီး အကြည်ရောင်အချွဲနဲ့ သွေးမျှင်လေးတွေနဲနဲပါလာပါတယ်။ ဝမ်းကိုက်တာပါလားသိချင်ပါတယ်။
• မသိနိုင်သေး။ ၀မ်းကိုက်ရင် အကြိမ်များမယ် ဗိုက်နာမယ်။ သွေးနဲ့ အချွဲ ပါမယ်။
• အူမကြီး ရောင်နေ။
• နာတာရှည်။ ဆောရီး။
• ဆရာရှင့် နာတာရှည်အူမကြီးရောင်တာက ကြာရင်ကင်ဆာဖြစ်သွားတတ်ပါသလား
• ဖြစ်နေတာကို ကုသသလား မသိ။ ကင်ဆာဆိုတာ စစ်မှသာသိနိုင်။
• ဆရာရှင့် ဆရာဝန်ညွှန်လို့ biofibre နဲ့ air x သောက်နေပါတယ်။ ဝမ်းကိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဝမ်းခဏခဏ သွားချင်ပါတယ်။ သွားတိုင်လဲ ပုံမှန်ဝမ်းပါဘဲ ဆေးကြောင့်လားသိချင်ပါတယ်။
• အရင်စာထဲပါ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်။
အူမကြီးဆိုတာ အထက်ကိုသွားတဲ့အပိုင်း၊ ကန့်လန့်သွားအပိုင်းနဲ့ အောက်ကိုဆင်းတဲ့အပိုင်းလို့ရှိတယ်။ အခုရောဂါက အဆုံးပိုင်းမှာရောင်တာ။ ဆစ်ဂမွိုက်ဒိုက်တစ်လို့ခေါ်တယ်။ အစပိုင်းမှာ အူအတက်ရှိတယ်။
ရက်တိုရောင်တာနဲ့ နာတာရှည်ရောင်တာလို့ရှိတယ်။ အမျိုးအစား မတူတာတွေရှိတယ်။ catarrhal or erosive sigmoiditis, ulcerative sigmoiditis, spasmodic sigmoiditis, paralytic sigmoiditis လို့ရှိတယ်။
တချို့မှာ နာမယ်။ ဗိုက် ဘယ်ဖက် အောက်နားမှာ။ ကျော်နဲ့ ခြေထောက်အထိနာတာခံစားရနိုင်တယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။ တချို့မှာ ဝမ်းချုပ်တယ်။ လူအနေအထားအပြောင်းမှာ ဝမ်းသွားချင်စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဝမ်းထဲမှာ အချွဲနဲ့ သွေးပါနိုင်တယ်။ လူက အားကုန်နေမယ်။
ရက်တိုဖြစ်တာ ရုတ်တရက်ဖြစ်တယ်။ ဝမ်းအရည်သွားမယ်။ အချွဲနဲ့ သွေးပါမယ်။ ဗိုက်ရစ်နာမယ်။ ပျို့ချင်မယ်။ အန်မယ်။ ကိုယ်ပူနိုင်တယ်။
ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းက အစာလမ်းပိုးဝင်ရာကနေစတယ်။ ဝမ်းကိုက်ပိုးလည်းပါတယ်။ Crohn’s disease ခရုမ်းရောဂါ၊ ulcerative nonspecific colitis အူမကြီးအနာကနေဆက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ အစာလမ်းသွေးမဝလို့လည်းဖြစ်တယ်။
ကုသရာမှာ ဘာကနေဖြစ်သလဲအပေါ်မူတည်တယ်။ အာဟာရနည်းနေတာကိုတော့ ဖြည့်ရမယ်။ antibacterial ပိုးသေဆေးတွေ၊ antispasmodic အနာသက်သာဆေးတွေနဲ့ astringent agents ဆေးတွေပေးတယ်။
Proctosigmoiditis အူမကြီးရောင်ခြင်းဆိုတာ ulcerative colitis ခေါ် အူမကြီးမှာအနာဖြစ်တာတမျိုးဖြစ်တယ်။ sigmoid colon အစိတ်အပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ အူမကြီးအဆုံးပိုင်းဖြစ်ပြီး အောက်မှာ အစာဟောင်းအိမ်ရှိတဲ့နေရာ။ ulcerative proctitis လို့လည်းခေါ်တယ်။ ulcerative colitis ထဲက ၅ဝ% ဟာ proctosigmoiditis ဖြစ်တယ်။
ဘာလို့ဖြစ်ရသလဲ သေချာ မသိသေးပါ။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မကတွေ့တတ်တယ်။ မြင့်တဲ့အရပ်ဒေသမှာနေသူတွေက ပိုဖြစ်ကြတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု မနိမ့်တဲ့ဒေသမှာနေသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ Salmonella နဲ့ Campylobacter ပိုးတွေ ကူးစက်ခံရဖူးသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
မကြာခဏ ဝမ်းလျှောမယ်။ တနေ့ ၄ ကြိမ်ကသွားမယ်။ တခါတလေ သွေးပါမယ်။ ဝမ်းသွားချင်စိတ်ဖြစ်နေမယ်။ ဗိုက်အောင့်မယ်။ ကိုယ်ပူနိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ တခါတလေ ဝမ်းချုပ်မယ်။
Colonoscopy ကရိယာနဲ့စစ်ဆေးရင် တွေ့မယ်။
5-aminosalicylic acid (5-ASA) ဆေးပေးတယ်။
Mesalamine ခေါ် အရောင်ကျဆေးသုံးနိုင်တယ်။ Lialda ဆေး၊ Asacol ဆေး၊ Pentasa ဆေး၊ Apriso ဆေး၊ Delzicol အမည်တွေနဲ့လာတယ်။
Corticosteroids စတီရွိုက်စားဆေးလည်း သုံးတတ်တယ်။ infliximab (Remicade) ဆေးလည်းသုံးတယ်။
ဆိုးတဲ့လူနာကို ဆေးရုံတင်ကုသရတယ်။ တချို့ကို ခွဲစိတ်ပေးမယ်။
Ulcerative colitis ဆိုရင် တချိန်မှာ Colorectal cancer အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Proctosigmoiditis အူမကြီး အောက်ပိုင်းရောင်တာကနေတော့ ကင်ဆာမဖြစ်ပါ။ Proctosigmoiditis ရောင်နေသူတွေကို ပျောက်အောင်အထိ ကုသလို့ မရနိုင်သေးပါ။ ဆောရီး။
တမြန်နှစ်က မေးတယ်။ Black Friday က ဘာကို ဆိုလိုတာလည်းဆရာ။ မေးတဲ့သူရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို သိပြီး ဖြေမှသာ လိုရာရောက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယူအက်စ်အေကိုမလာခင်အထိ ဘလက်ဖရိုင်းဒေးဆိုတာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေ လ ၃၀ ရက်၊ သောကြာနေ့ကို အဲလိုခေါ်ကြတယ်။ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းကြီးဖြစ်တဲ့နေ့။
ယူအက်စ်အေမှာ ကြာသပတေးနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သင့်စ်ဂစ်ဗင်းနေ့ နောက်ရက် သောကြာနေ့ကိုခေါ်ကြတယ်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်ကတည်းစတယ်လို့ဆိုတယ်။ နောက်လထဲမှာ လာတော့မယ့် ခရစ်မတ်အတွက် ပစ္စည်းတွေဝယ်ကြတာပါ။ လက်လီဈေးဆိုင်တွေ စီးပွါးရှာနည်းတခုလည်းဖြစ်တယ်။
၁၈၆၉ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာ ၂၄ ရက်နေ့နဲ့ဆက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ရွှေဈေးကွက်ကြီး ပြိုဆင်းခဲ့ရတဲ့နေ့။ အဲဒီကနေ အမြတ်ပြန်ရအောင် နည်းလမ်းတခုအဖြစ်သုံးတယ်လို့လည်း ယူဆကြတယ်။
ဘလက် ဖရိုင်းဒေးနေ့မှာ အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းကြမယ်။ ဈေးတွေ သိသိသာသာလျော့ချထားတယ်။ ဆိုင်တွေ မဖွင့်ခင်ကတည်းက လူတွေအများကြီး တန်းစီနေကြတယ်။ တန်းအရှည်ကြီး။ ရေခဲအမှတ်ဝန်းကျင်ထိ အေးချမ်းလှတဲ့ အချိန်မှာ။ အခုကတည်းက ဘယ်ဆိုင်တွေက ဘယ်အချိန်ဖွင့်မယ်။ ဘာတွေကို ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမယ်လို့ ကြော်ငြာနေကြပြီ။
၁။ Best Buy မှာ
သင့်စ်ဂစ်ဗင်းဒေး ညနေ ၅ နာရီကနေစမယ်။ သောကြာနေ့ သန်ကောင်ကျော် ၁ နာရီအထိ။ နောက် မနက် ၈ နာရီ ပြန်ဖွင့်ပြီး ည ၁ဝ နာရီအထိ။
50-inch 4K Smart TV ကို $180 နဲ့ရမယ်။ $320 လျှော့ထားတယ်။
Google Home Mini ကို $30 နဲ့ရတယ်။ $20 လျှော့ထားပြီး $10 gift card ပါရမယ်။
10.5-inch iPad Pro ကို $150 အထိလျှော့မယ်။
၂။ Kmart ဆိုင်
55-inch Samsung 4K Smart TV ကို $500 နဲ့ရောင်းမယ်။ $200 လျှော့ထားတာ။
luxurious 1,000 thread count sheets ကို $20 နဲ့ရောင်းမယ်။ 30 လျှော့ထားတယ်။
Barbie dolls တွေကို $2 နဲ့ရမယ်။ $5 ကနေ $8 အထိလျှော့ထားတယ်။
၃။ Kohl's ဆိုင်
PlayStation4ကို $200 နဲ့ရမယ်။ $100 လျှော့ထားတယ်။
Diamond bracelet ကို $70 နဲ့ရမယ်။ $230 လျှော့ထားတယ်။
Google Home ကို $80 နဲ့ရမယ်။ $50 လျှော့ထာတယ်။
Sky Rider HD camera drone ကို $50 နဲ့ရမယ်။ $100 လျှော့ထားတယ်။
၄။ Macy's ဆိုင်
A3500 Vitamix blender ကို $350 နဲ့ရမယ်။ $250 လျှော့တယ်။
၅။ Walmart ဆိုင်
Dyson cordless vacuum cleaner ကို $190 နဲ့ရောင်းမယ်။ $176 သက်သာမယ်။
Google Chromecast ကို $20 နဲ့ရမယ်။ $15 သက်သာတယ်။
iPad 5th Gen 32GB ကို $249 နဲ့ရမယ်။ $80 သက်သာမယ်။
Samsung 65-inch Class Curved 4K Smart TV ကို $1,000 နဲ့ရမယ်။ $300 သက်သာတယ်။
စာရင်းသစ် မထည့်အားပါ။ ဆောရီး။ ဒီနှစ် ဘလက်ဖရိုင်းဒေးက လာမဲ့သောကြာနေ့။ ကြာသာပတေးနေ့ ညသန်ကောင်အချိန်ကစတယ်။ ယူအက်စ်အေနေ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဝယ်ခြမ်းနိုင်ကြပါစေ။ အချမ်းဒဏ်လည်း ခံနိုင်ကြပါစေ။
ကွန်မင့်မှာလာလာ မက်စင်ဂျာကလာလာ ဖျက်ပါတယ်။ အခါတရာ ကျော်ပါပြီ။ တယောက်လာ ဒီလိုအရုပ်၊ နောက်တယောက်လာ ဟိုလိုအရုပ်။ တပ်ချည်းတလဲ။ လက်နဲ့ ကောင်း မကောင်း ကြိုက်မကြိုက် မရေးအားကြရင် ဘာအရုပ်မှ မပို့စေလိုပါ။ ဟိုဒ်လုပ်နေရတာ အလုပ်ကြီးတခု။
Stickers အရုပ်သည်တွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/stickers.html
Stickers for sale ဟောဒီက အရုပ်တွေရမယ် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/stickers-for-sale.html
Do Not Send ဆုတောင်းတာတွေ မရလိုပါပြီ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/do-not-send.html
GIF Files နောင်တသက်လုံး အဲလိုဟာတွေ မပို့စေလိုပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/no-video-files.html
Emoji Stickers အရုပ်သယ်တွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/11/emoji-stickers.html
အခုရက်တွေမှာ တင်နေကြတယ်။ တို့ဆေးတဲ့။ ကက်တမင်းဆေးတဲ့။ ဟိုဆေးသည်ဆေးတဲ့။
တခုက မိန်းကလေးတို့ရဲ့ ဘဝကို အလွယ်တကူ ပျက်စေနိုင်တဲ့ သကြားလုံး (လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ အမျိုးတို့ရေ) တဲ့။
အရင်က အဲလိုဆေးတွေအကြောင်း ရေးထားတယ်။ ကြော်ငြာသလို မဟုတ်တာတွေက များတယ်။ တမျိုးကတော့ Spanish Fly စပိန်လုပ် ယင်ကောင်က ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆေး။ တိတိကျကျဆိုရင် blister beetles (cantharidin) အကောင်လေးတွေကို ချေမွပြီး ချိုတာတခုခုနဲ့ ရောထားတာ။
အဲဒီဆေးသောက်လိုက်ရင် ကိုယ်အပူရှိန် တက်လာမယ်။ လိင်အင်္ဂါတွေပါ တခြားနေရာတွေလိုရောင်ရမ်းလာမယ်။ အဲတာဟာ အင်ဖေလယ်မေးရှင်း ခေါ် ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်သာဖြစ်ပြီး အထရွက်ရှင် ခေါ် ဆွဲဆောင်မှုပေးတာ မဟုတ်ပါ။
၁၇၇၂ ခုနှစ်က ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းစားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုဆေးပေးတော့ သေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါသတဲ့။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ များတယ်။
1. painful urination ဆီးအောင့်မယ်။
2. blood in urine ဆီးထဲသွေးပါမယ်။
3. vomiting blood သွေးအန်မယ်။
4. difficulty swallowing မျိုချရခက်မယ်။
5. abdominal pain ဗိုက်နာမယ်။
6. kidney failure ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဖြစ်မယ်။
7. gastrointestinal bleeding အစာလမ်းသွေးထွက်မယ်။
8. convulsions ဆက်မယ်။
9. coma သတိလစ်မယ်။
ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းကနေဖြစ်ဖြစ် ဆေးဆိုင်တွေကဖြစ်ဖြစ် အခုလည်း ဝယ်လို့ရတယ်။ ဘာပါတယ်လို့ မသိတာတွေ ထည့်ထားတယ်။ ဘာဖြစ်မလဲ မပြောနိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါသတဲ့။ စပိန်လုပ်ဆိုပြီး အမည်ကိုသာဆက်သုံးတာ၊ ထုတ်ချင်တဲ့ဆီကနေ ထုတ်တယ်။ ဆေးအတု ဘယ်ကအများဆုံးလဲ မပြောပဲသိကြတယ်။
မြန်မာလိုဖတ်ရတာတွေမှာ ပညာပေးသလိုလိုနဲ့ ဖတ်ချင်အောင် ဇာတ်လမ်းတွေဆင်ရေးကြတာက များတယ်။ တကယ် အဲလို မဟုတ်ပါ။ အစစ်အမှန်သုံးတဲ့ဆေးတွေအကြောင်း ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။ လင့်တွေ မတင်တော့ပါ။
တခါတလေမှ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဝတ္ထုတွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာထက် ဆန်းတယ်။ ဝတ္ထုတွေ ရုပ်ရှင်တွေမှာ တကယ့်အဖြစ်မဟုတ်တာက အလွန့်အလွန်များတယ်။ ကြော်ငြာကောင်းရင်တော့ ရောင်းရတယ်။
ကျန်းမာရေးပညာပေးကို ကြော်ငြာလိုရေးတာ မသင့်ပါ။ လိမ်တာ။
ဓါးပြတိုက်လို့၊ အခိုးခံရလို့ ဆင်းရဲသွားတာထက် ကိုယ်အသုံးမကျလို့ မွဲသူတွေကသာများတယ်။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲများအောက်မှာ ကွန်မင့်တခုလာတယ်။ ဆရာ ငါးတွေလည်းပေး၊ ငါးဖမ်းနည်းလည်း ရေးပေးပါလား ဆရာ။ ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့။
ဈေးဝယ်နည်းရှိတယ်။ ဆန်ကို ဟိုဆိုင်က၊ ဆီကို သည်ဆိုင်ကဝယ်တယ်။ ဈေးဝယ်ရင် ဆိုင်တော့ ရွေးတတ်ရတယ်။ ပစ္စည်းကောင်းလည်း ကြည့်တတ်ရမယ်။ တခွန်းဆိုင်မဟုတ်ရင် ဈေးဆစ်ဘို့ပါ မမေ့နဲ့။
တချို့က အရောင်လေးလှတာ၊ အဖုံးလေးလှတာ ရွေးဝယ်ကြတယ်။ စာအုပ်တွေလည်းပါတယ်။ ခေတ်ဟောင်းက နာမည်ကြီးစာအုပ်တွေ။ အထဲမှာတော့ ပေါ်လစီသတ်ပုံတွေနဲ့ ပြောင်းရိုက် ပြန်ထုတ်တွေ။ ခုခေတ်မှာ အဲတာမျိုးသာ ဖတ်ကြရတော့တယ်။ ရောင်းတာသာ ဝယ်လို့ရတဲ့ခေတ်မှာ။ ရောင်းတဲ့သူတွေက ပိုက်ဆံသာ မြင်ကြတာ။ ကွန်ပြူတာ စာစီတွေကလည်း အေဖိုးတမျက်နှာဘယ်လောက်ရတယ်။ တမှန်သမျှကို စသတ်ရတော့ တွက်ချေ ပိုကိုက်တယ်။
ဈေးဝယ်နည်းကို ကျွန်တော်လည်း အခါခါအညာခံရပြီးမှ တတ်တာ။
ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ ဘလက်ဖရိုင်းဒေး လာတာ့မယ်။ ဝီရိယကောင်းရင် လျှော့ဈေးနဲ့ ပစ္စည်းကောင်းတာတွေရမယ်။ ဒီမှာက မကောင်းရင် ရောင်းမစွန်။ စပယ်လင်ပြင်စာအုပ် မရှိ။
ကျွန်တော့်တပည့်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ဝေါဟာအရဆိုရင် ဖရင်းတယောက်က ကွန်မင့်ရေးတယ်။
မောင်မောင်ညွန် ဆိုတဲ့သီချင်းလေး သွားပြီးသတိရမိပါတယ်ဆရာ။ ဆံဖြူ သွားကျွေ ပါးရေ နားရေထွန့်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ဆရာနဲ့မမအေးတို့ကိုဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါတယ်ဆရာရှင့်။
သူ့သတ်ပုံကို ပြင်ပေးလိုက်တယ်။ ကြွေ
တခိုင် တဖူး၊ ငယ်ချစ်ဦးလေ
ထွက်ခွါရင်ဆိုင်၊ မြိုင် မြိုင် မြိုင် ရယ်
မောယိုင်ပန်းလျ၊ ဘဝ အလွမ်း
ကျမ်းစာ လေးလံ၊ ဆေးတံ တတို
ဗန်းမော် ချစ်သား၊ အမေ့နာ့မှာ
ကိုယ်စား ဝိညာဉ်၊ ရှင်သန်ဆဲပါ။
ပြည်တော်သာ ခင်ခင်ဦး ရဲ့
ချစ်ဖူးသက်ဝေ၊ သူ သေ သေပြီ
မသေကျန်ရစ်၊ အမွေနှစ် ဟာ
နွေတရာလမ်း၊ ကြွေ ကြွေနွမ်းပြီ
သစ္စာ သန့်စင်၊ မြတ်ဝိညာဉ်အား
လင်းယုန် စောင့်ကြပ်စေသတည်း။ ။
မောင်ခိုင်မာ ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာ။ ကြွေသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ စာပေပညာရှင်များစွာ။ အနှစ်အရသာ အဓိပ္ပါယ် များစွာ။ မြန်မာစာ သတ်ပုံမှန်နဲ့ပါ။ ယနေ့အခါ မြန်မာစာ ကြွေလေပြီကောဗျာ။ အဆုတ်ကင်ဆာ ကျဆုံးပါစေ။
တယောက်တမျိုးကို တစ်ယောက်တစ်မျိုး၊ နှစ်ယောက် နှစ်မျိုးကို နှယောက် နှမျိုးလို့ တညီတညွတ် ရေးသားနေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ရေးတဲ့စာတွေကို မဖတ်တတ်တော့။
ဒေါ်မြမြအေး သွားဆေးခန်းမှာ။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ သွားအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံက အတော်ခက်တာ။ အတော်များများ ကာဗာမဖြစ်ပါ။
နှစ်ပေါင်းခုနစ်ဆယ် စားဝါးလာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ၃၂ ချောင်းသောသွားတွေ စုံအောင်မရှိကြတော့ပါ။
ဆံဖြူ သွားကြွေ ပါးရေ နားရေ တွန့်ကြတဲ့အရွယ်။
ဆရာရဲ့ post တွေမှာ အမြဲကော်ဖီခွက်လေးတွေ့ရပါတယ် ဆရာဘာကော်ဖီသောက်ပါသလဲရှင် ရိုသေစွာဖြင့်
ဟုတ်။ ကျွန်တော်က မနက်တိုင်း ကော်ဖီတခွက်သောက်တယ်။ မေးတဲ့သူရှိတိုင်း ကော်ဖီစာရေးလည်းတယ်။
1. Coffee and Health ကော်ဖီ နဲ့ ကျန်းမာရေး https://doctortintswe.blogspot.com/…/04/coffee-and-health.h…
2. Coffee and Pregnancy ကော်ဖီနဲ့ ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/…/coffee-and-pregnancy.h…
3. Coffee and Tea Question အရေမရ အဖတ်မရ https://doctortintswe.blogspot.com/…/coffee-and-tea-questio…
4. Coffee mix ကော်ဖီမစ် မေးခွန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/10/coffee-mix.html
5. Ice Coffee Ice Tea ရေခဲ ကော်ဖီနဲ့ တီး https://doctortintswe.blogspot.com/…/ice-coffee-ice-tea.html
6. Lady coffee လေဒီကော်ဖီ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/dirty-coffee.html
7. Love Coffee ညစ်ညမ်းကော်ဖီ (သို့) သင်္ကြန်စာတပုဒ် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/love-coffee.html
8. Morning Coffee မောနင်း ကော်ဖီ https://doctortintswe.blogspot.com/20…/…/morning-coffee.html
9. Zhulian Instant Coffee Plus ဇူလီယန်ကော်ဖီ https://doctortintswe.blogspot.com/…/zhulian-instant-coffee…
အဲတာကြောင့် တခါတခါမှာ Nescafe Coffee လာကန်တော့တာ လက်ဆောင်ပေးတာ ရတယ်။ ကျေးဇူး။
နှစ်စဉ် နတ်တော်လဆန်း ၁ ရက်နေ့သည် စာဆိုတော်နေ့ဖြစ်သည်။ ယင်းစာဆိုတော်နေ့ကို ၁၃၀၆ ခုနှစ် ဂျပန်ခေတ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီး ဦးလှမင်း၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ သူကြီးဂေဇက် ဦးခင်မောင်၊ ဦးသိန်းဟန်၊ ဦးကောင်း၊ သူရိယ ဦးသိမ်းမောင်၊ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်၊ ဇဝန၊ မြို့မ ဆရာဟိန် စသော မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာများအသင်း အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် စာပေဆိုင်ရာ လူကြီးများ ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ် စာဆိုတော်နေ့တွင် စာရေးဆရာကြီးများအား ကန်တော့နေကြပုံ
(ဝဲ မှ ယာသို့) ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ ဦးဖေသိန်း (ရွှေဥဒေါင်း)
ခုခေတ် စာဆိုတော်နေ့တွေမှာ ဟောပြောနေကြသူတွေထဲမှာ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ ဦးသိန်းဟန် (ဇော်ဂျီ)၊ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်၊ ဇဝန၊ ဦးဖေမောင်တင်၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ ရွှေဥဒေါင်းတို့ ရေးသားခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာစာ သတ်ပုံတွေကို တမင်တကာ ပြင်ထားတဲ့အတိုင်း စာတွေရေးသားနေကြသူတွေက ၉၀% ပါတယ်။ ၁၀၀% ကနေ လက်ခုပ်တီးကြတယ်။
အဆင့်ပါလည်းရ၊ မပါလည်းရ။ အစဉ်အဆက် ဒီဇင်္ဘာလို့သာ ရေးလာခဲ့ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကနေယူတာဖြစ်လို့ အသံထွက်မှန်ရင် မှားတယ်လို့တော့ ပြောမရ။ ဒါပေမဲ့ အစဉ်အလာကို လေးစားတာ ကောင်းမလား မသိပါ။
ဇန္နဝါရီ၊ ဇန်နဝါရီ။ ဧပြီ၊ အေပြီ။ သြဂုတ်၊ သြဂတ်စ်။ စက်တင်္ဘာ၊ စက်တင်ဘာ။ နိုဝင်္ဘာ၊ နိုဝင်ဘာ။ ဒီဇင်္ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ။
အမည်တွေမှာ အစဉ်အလာရှိတာတွေကို မပြင်သင့်ပါ။ မန္တလေး၊ မုတ္တမ၊ မိတ္ထိလာ (မူရင်းသတ်ပုံမှာ မိတ္ထီလာမဟုတ်)၊ ပခုက္ကူ၊ ဟုမ္မလင်း၊ နတ္တလင်း၊ မုပ္ပလင်၊ အလ္လကပ္ပ၊ သခွတ္တနယ်၊ သေတ္တရာရွာ၊ သာဝတ္ထိ၊ စေတုတ္တရာ၊ နမ္မတူ၊ သရေခတ္တရာ၊ စတဲ့အမည်တွေမှာ အဆင့်တွေနဲ့သာ ဆက်ရေးသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ခုတလော ရန်သတ်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးကိုတွေ့ရတာများနေပြီ။ ကျွန်မနားလည်မိတာကတော့ ရန်ကိုပယ်သတ်တာထင်ပါတယ်။ ခုရေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်က ရန်ဖြစ်သတ်ပုတ်တာဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်။
ရင်သပ်ရှုမောလို့ရေးရတယ်။ တွဲတင်တဲ့ပုံကို အမေ့အိမ်: ရင်သတ်ရှုမောဖွယ်ရာလို့ရေးထားတာ မှားတယ်။ ရင်ကို သေအောင်သတ်တာ ဖြစ်နေတယ်။ ယင်ကောင်သာ သေအောင်သတ်လို့ ရေးရတယ်။ ပုံအတွက် ကန်တော့။
သတ်နင်း = သစ်နင်း = သနင်း
သတ်နင်း = သတ္ထုမဒ္ဒန = ရန်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်သောမင်း
၂ဝ၁၉ ဒီဇင်္ဘာလဟာ မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း (၅) ရက်ကနေ ပြာသိုလဆန်း (၆) ရက်နေ့အထိ ကျရောက်တယ်။
ဒီဇင်္ဘာဆိုတာ လက်တင်လို Decem ကနေလာတာဖြစ်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်က (၁ဝ)။ ပေါ်ကာစပြက္ခဒိန်မှာ (၁ဝ) လသာပါလို့ ဖြစ်တယ်။
ဒီဇင်္ဘာ နှစ်ပါတ်လည်နေ့များနဲ့ ဆောင်ပုဒ်များ
• December 1 = ကမ္ဘာ့ World AIDS Day နေ့။ ပေါ်တူကီ လွတ်လပ်ရေးပြန်ရခြင်းနေ့၊ ရူမေးနီးယား ပြည်ထောင်စုနေ့၊ EataRed Apple Day ပန်းသီးအနီတလုံးစားပါ။
• December2= ယူအေအီးနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့။
• December3= International Day of People with Disability နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းသူများနေ့။
• December4= World Wildlife Conservation Day ကမ္ဘာ့ တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်များ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့။ အိန္ဒိယ ရေတပ်မတော်နေ့။
• December5= Volunteer Day စေတနာ့ဝန်ထမ်းနေ့။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရင့်မွေးနေ့ (ဖခင်နေ့)။
• December6= ဖင်လန်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့။ စပိန်နိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနေ့။
• December7= Pearl Harbor Day အမေရိကန် ပုလဲဆိပ်ကမ်းနေ့။
• December9= Christmas Card Day ခရစ္စမတ်ကပ်နေ့။
• December 8 = ပနားမားနိုင်ငံ မိခင်နေ့။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနေ့။
• December 10 = နိုဗယ်ဆုပေးတဲ့နေ့ Alfred Nobel ကွယ်လွန်တဲ့နေ့။ လူ့အခွင့်အရေးများနေ့။
• December 11 = Mountain Day တောင်များနေ့။
• December 12 = ကင်ညာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့။
• December 14 = Monkey Day မျောက်နေ့။
• December 16 = ဘာရိန်းဘုရင့်နိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် အောင်ပွဲနေ့။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့။ Beethoven's Birthday ဂီပညာရှင် ဗီသိုဗင်မွေးနေ့။
• December 17 = Maple Syrup Day မေပယ်အချိုရည်နေ့။
• December 25 = ခရစ္စမတ်နေ့။
• December 26 = Boxing Day အိမ်စေများ၊ တပည့်များအား လက်ဆောင်ပေးသည့်နေ့။ ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့။
• December 27 = Visit the Zoo Day တိရစ္ဆာန်ရုံလည်ပါ။
• December 28 = သြစတေးလျတောင်ပိုင်း Proclamation Day နေ့။ Chocolate Day ချော့ကလက်နေ့။
• December 31 = New Year's Eve နှစ်သစ်ကူး အဖိတ်နေ့။
ဒီဇင်္ဘာ တလလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆောင်ရွက်ရန်များ
• World Aids Month ကမ္ဘာ့ AIDS လ။
• National Drunk & Drugged Driving Prevention Month မူးယစ်ဆေးနဲ့အရက်သုံးပြီး ကားမောင်းခြင်း ကာကွယ်ရေး အမျိုးသားလ။
• Vegetables and Exotic Fruits Month အမြစ်ပါအသီးအနှံများနှင့် အရောင်အသွေးစုံ နှစ်သက်ဖွယ် အသီးများလ။
• Safe Toys and Gifts Month ကလေးကစားရများနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများစိတ်ချရမှုလ။
• Spiritual Literacy Month ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာစာပေလ။
• Tomato and Winter Squash Month ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် ဆောင်းဖယုံသီးလ။
• Worldwide Food Service Safety Month ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု စိတ်ချရမှုလ။
၁၈-၁၂-၁၉၉ဝ NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့။
Sweet December ဆိုတာကို ဒေလီမှာနေခဲ့တုန်းက ချင်းလူမျိုးခရစ်ယန်တွေပြောကြတာသိရပေမယ့် လိုက်ရှာတော့ သီချင်းနာမည်သာတွေ့ရတယ်။ တခြားခရစ်ယန်ကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မတွေ့မိပါ။ ယူအက်စ်အေမှာလည်း မသိကြပါ။
၂၂-၁၂-၂၀၁၈ နေ့ကို မြန်မာပြည်ကထုတ်တဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ တရုပ် မုန့်လုံးရေပေါ်နေ့လို ဖော်ပြထားတယ်။ အရင်က အဲတာမျိုး မလုပ်ခဲ့ကြပါ။
• မြန်မာပြည်မှာ Smooth Luffa (Luffa cilindrica) ခဝဲပန်း၊ Chrysanthemum ဂန္ဓမာပန်း၊ Kaempferia pulchra ဂမုန်းပန်းနဲ့ Bulbophyllum auricomum သဇင်ပန်းတွေပွင့်ကြမယ်။
• နိုင်ငံတကာ ဒီဇင်္ဘာပန်း = Narcissus ပန်း (မြန်မာလိုမသိပါ)၊
• ဒီဇင်္ဘာ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင် = Sagittarius = ဓနု (၂၁ ရက်အထိ)၊ Capricorn = ဆိတ် (၂၂ မှစ၍)
• ဒီဇင်္ဘာ အဖိုးတန်ကျောက်များ = Turquoise, Zircon, Tanzanite စိမ်းပြာကျောက်များ၊
ခေါင်းစဉ်က ထိတ်လန့်စေချင်လို့ မဟုတ်ပါ။ သဘာဝဘေးလည်း မဟုတ်ပါ။ လူလုပ်ဘေး။ နာမည်ပြောင်းရေးတာ ခံရနိုင်လို့။
ငါ့တရော် (စစ်ကိုင်း မြို့နယ်)
အထက်ပါ မြို့ ရွာ ရပ်ကွက် အမည်များပါ (တ) ကို စသတ်ခံရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေတယ်။ တိုင်တရာ စကောကရင် ကျောင်းကိုတော့ နဝတ ခေတ်မှာ တစ်လုပ်ခံလိုက်ရတယ်။
သတင်းတပုဒ်မှာ စက္ကန့် ၃ဝ ခန့် မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတလို့ ဖတ်ရတယ်။ ကလေးစာပေပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသတင်းမှာပါ။ သမတဦးထင်ကျော်က ကိုယ့်အတွက်ထက် အများအကျိုးကို စဉ်းစားတတ်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် စာပေလေးတွေကို လေ့လာစေချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ ကလေးတိုင်းက ဆရာမင်းသုဝဏ်ရေးခဲ့တာတွေနဲ့သာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။ ပန်းသည်၊ ဝါဆိုဝါခေါင်နဲ့ ဆွမ်းအုပ်နီနီကဗျာတွေဟာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာ သင်ရိုးဖတ်စာဖြစ်ခဲ့တယ်။ သပြေသီးကောက်၊ သပြေညိုနဲ့ တို့မလေးကဗျာတွေကို လူရွယ်တိုင်းက နှစ်သက်စွဲလမ်းခဲ့ကြတယ်။ ပျဉ်းမငုတ်တိုနဲ့ ဖိုးမောင်လာပြီ ကဗျာတွေဟာ တော်လှန်ရေးအဆက်ဆက်မှာ အားတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ကံထောက်မ၍ ၊ ဤယနေ့မူ
မျက်ကန်းမလေး မြင်လေပြီ။ (မင်းသုဝဏ်)
ကနေ့ခေတ် အရာရာကျဆင်းဆုတ်ယုတ်နေတာထဲမှာ မြန်မာစာပါတယ်။ စကားရော သတ်ပုံပါ အမှားတွေ အလွဲတွေနဲ့သာ ပြောနေ၊ ရေးနေ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေကြတယ်။ ကလေးစာပေဆိုတာ ကလေးသွားရည်စာ ကြည့်ပါပြောရင်ရတယ်။ ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ ပန်းသည်ကဗျာကို ပြန်ထုတ်သူတွေက တစ်ကြော့နှစ်ကြော့ လုပ်နေကြတာ မသင့်လျှော်ပါ။ လူကြီးဆိုသူတွေကိုယ်တိုင်က အဲလိုတွေ ဖြစ်နေကြတော့ ကလေးတွေကနေစမှသာ ရတော့မယ်။
တကြော့ နှစ်ကြော့ တေးကိုသီ၊
ပန်းသယ်လုပ်စို့ - တပြုံးပြုံး၊
ပန်းတွေ - တကုံးကုံး။ (မင်းသုဝဏ်)
လူကြီးတွေက မမြင်ကြလည်း၊ ချစ်သူမဝေး တို့မလေးများ စာရေးလည်းတတ် စာဖတ်တတ်ပါစေသတည်း။
တခါတလေ တယောက်တည်း၊ တခါတလေ တမိသားစုလုံး။
(တစ်) ယောက်တည်း မစား။ (တစ်) မိသားစုလုံး မစား။
(တစ်) ခါ (တစ်) လေ မစား။ (တစ်) ခါ တလေ မစား။ တခါ (တစ်) လေ မစား။
(တစ်) သက်လုံး မစား။
တွံတေးသိန်းတန် လေးနွယ်သီချင်းထဲမှာ ဟိုတခါက လေးနွယ်နှမလို့ရေးပါတယ်။
တခါတရံ ချစ်သူထံရည်စူး ခူးပေးချင်ရဲ့့
တခါတလေ ဝဠာဗွေအုံ့ဆိုင်း ရှစ်တိုင်းကမှောင့့်
ဟိုတခါက လေးနွယ်နှမကို မေ့လိုက်ကြပြီ။
တွံတေးသိန်းတန် လေးနွယ် https://www.youtube.com/watch?v=CeGUfh_xYdk